Maalmo-mugdiyeedka Mandheera!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka June 4, 2015	0 433 Views
Muqdisho (Himilonews) – Cabsi ayaa isku qafishay gidaarada wadnaha uu qofka kasta ku shaqeeyo. Dabley hubeysan ayaa toddobaad kahor soo gashay tuulo qiyaastii 30—km dhanka koofur kaga beegan magaalada Mandheera; iyaga oo la baxay horfiiqii tuulada iyo ku-xigeenkiisa. Si foolxun oo madal-ku-joog ah ayay nafta u seejiyeen horfiiqii tuulada oo dadku ugu yeeri jireen Chief—iyaga oo dadka faray inaysan ka guban waxay ku sheegeen eedsiis gaboodfaleed—kahor intaysan ifka dhaafinin. Falalka ceynkan ah waxaa dhabarka-u-rita Ururka Islaamiga ah ee Al-Shabaab.
Tuulada Arabiya oo ah goobta uu falkani ka dhacay, ugub kuma ahayn in weeraro ama dilal qorshaysani ka dhacaan; balse dhacdadani ayaa la timid ugubnimo uurkutaaleed. Dadka reer Mandheera waxay baranayaan dhacdooyin waaya’aragnimo ugu filan. Mar kasta oo aan kula socdaalno dowladda Mandheera guud ahaan soohdimaheedana, waxaynu la aragno ayaa ku filan waxaynu maragsano.
Tan iyo kolkii ciidanka Kenya gudaha u galeen Soomaaliya, shacbiga ku nool gudaha gobolka waqooyi bari Kenya waxay dhibane u noqdeen loolanka iyo ol’olaha gulufka ku dhisan ee ka dhaxeeya dowladooda iyo Ururka Al-shabaab. Magaalooyinka qaar sida Mandheerana waxay yeesheen muuqaal malluugan iyo micno dahsoon.
Balse su’aal ayaa ka timid dareenka bulshada taas oo ah—maxay Kenya oo ah dowlad ciidan ku filan gudo iyo dibadba heysata ugu filnaan weyday sugidda nabadgalyo ee shacbigeeda oo ay ugu howlan tahay xaqiijinta nabadeed ee dalka burburay ee Soomaaliya? Sow ma ahan wixii la yiri; tiisa kii daryeelaa ku kale ku dara!!
Barasaabka Gobolka Mandheera, Mudane Ali Roobo, wuxuu xilka qabtay sanado kahor; sida uu ku socdaalana waxaa ku sugan dareen dhiiloon. Xittaa galbinta ciidamo agab iyo itaalba ka haqab-tiran oo kolonyadiisa wehlinaysa, wali maysan u hantinin bad-qabkiisa. Hayeeshe, tani uma muuqata inay welwel ku hayso ahaanta ay tahay mid kamid ah shaqooyinka ugu adag ee dunida laga qabto.
Tiiyoo ay jirto isku-day dhicisoobay oo lala damacsanaa in lagu qaarijyo kol dhawayd, Ali Roobo wuxuu ku taagan yahay hal-adaygnimada ah socdaal aan hakad lahayn iyo booqashooyin uu ku sameynayo tuulooyinka hoos yimaada maamulkiisa. Ali Roobo kama dahsoona caqabadaha culus ee horyaalla maamulkiisa—balse wuxuu mar un ku han-weyn yahay in Mandheera ay noqon doonto mid kamid ah magaalooyin ugu mudan ee la majeersado; mithaalna u noqota magaalooyinka kale.
Sugidda amniga ee xilliga habeenkii, fiidkii hore ilaa hiirta waaberi, ciidamo Hoongad iyo AP isugu jira ayaa gaaf-wareega; wadooyinkuna waa cidlo. Gaaf-meerka guud oo xoogga dalkani Kenya magaalada kusoo rogeen, AP-da iyo Hoongadkuba waa kuwa ku dhiirran u bareeridda sugidda nabadgalyada. Weerarada galinka hore dhacana waa kuwa la raad-guro guntigooda.
Daba-gallada, raafidda iyo guulguulka aan dhamaaneyn ee loogu jiro hubinta amni ee magaalada iyo in laga gaashaanto tumaatida Al-shabaab, maamulka Ali Roobo iyo bulshada Reer Mandheeraba waxay naawilayaan in Mandheera cusubi madaxa kala soo kacayso mushkiladaha taagan; taasna ay halis kasta ugu bareeri doonaan si ay u xaqiijiyaan.
Mandera County, NEP, Kenya.
Previous: Bulshada iyo Hab-fahmeedka Deegaan
Next: Baydhabo Mise Barisamo!!
Kenya oo laga mamnuucayo isticmaalka Bacda ‘Plastic Bag’
Ururrada Diimaha Maraykanka oo sanad kadib mamnuucistii Trump isugu soo baxay inay naqdiyaan.
Shiinees qaadatay Islaamka si uu u guursado Muslimad Nigerian ah.